Eyona ndlela yokunciphisa umzimba ngokwenzululwazi Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ukuba ubuza ingcali yokutya malunga neyona ndlela yokunciphisa umzimba, uya kufumana iimpendulo ezininzi.
1 Ngaba ukhetha njani indlela yokulahleka kobunzima esebenzayo ngokwenene?
2 Eyona ndlela yokunciphisa umzimba
3 Inkxaso ibalulekile
4 Landa umkhondo wekhalori
5 Guqula imikhwa yakho ukuze utshintshe ubunzima bakho
Ngaba ukhetha njani indlela yokulahleka kobunzima esebenzayo ngokwenene?
Uphando lwenzululwazi lwakutsha nje luveze eyona ndlela yokunciphisa umzimba. Ngapha koko, abaphandi bachonge amanqaku amathathu ayimfuneko ukunciphisa umzimba.
Ngokophononongo olukhulu lwezifundo zokuphulukana nobunzima ezenziwa ziiyunivesithi zaseMelika ePennsylvania, eDrexel naseColorado, zaze zapapashwa kwiJenali yaseMelika, abantu abatyebe kakhulu abadibanise le misebenzi mithathu baphumelele kakhulu ekunciphiseni ubunzima.
Ukutya okunciphisa ukutya malunga neekhalori ezingama-500 ngosuku;
Umsebenzi omninzi wokuzilolonga, njengokuhamba imizuzu engama-20 ukuya kwengama-25 yonke imihla;
Inkxaso evela kwingcali eqeqeshiweyo, njengogqirha okanye isondlo.
Xa iingcali zavavanya iziphumo zezifundo ezahlukeneyo zokulahleka kwesisindo, zafumanisa ukuba xa abantu besenza enye yezinto kuluhlu kodwa ingengabo abanye, bebengaphumeleli kangako. Kwaye nabantu abenze kuphela izinto ezimbini baphulukana nobunzima. Abantu abaphulukene nobunzima kakhulu ngabo badibanisa izinto ezintathu: ukutya, umthambo kunye nenkxaso ekhethekileyo.
Eyona ndlela yokunciphisa umzimba
Mhlawumbi iziphumo zophononongo azothusi. Emva kwayo yonke loo nto, inyani yokuba kufuneka utye kancinci kwaye ushukume ngaphezulu ayizizo iindaba ezothusayo. Kodwa kukho ezinye iziphumo ezivela kolu phando ezinokuba luncedo kwabo bazama ukuphalaza iipawundi kwisikali.
Sukuyijongela phantsi indima enokuthi idlalwe ngumondli wesondlo okanye ugqirha weeurologist kuhambo lokunciphisa umzimba. Ingcali inokukunceda uqonde ukuba ukunciphisa umzimba kunokuyiphucula njani impilo yakho. Banokubonelela ngenkxaso kunye nokuhanjiswa kwezinye iingcali, ezinje ngotitshala womzimba okanye isayikholojisti yempilo yokuziphatha, ukulawula iimvakalelo ezichaphazela isondlo Inkxaso inokukunceda uhlale ukhuthazekile kwaye ulandele umkhondo xa kuvela iingxaki.
Landa umkhondo wekhalori
Ukuba ufuna ukufezekisa iikhalori ezingama-500 ngosuku, njengoko isifundo sibonisa, kufuneka ulandele ukutya okutyayo, ngakumbi ekuqaleni kwenkqubo. Ngaphandle koko, ngekhe wazi ukuba ufikelela usukelo lwakho rhoqo. Ukungaguquguquki kubalulekile xa kuziwa ekunciphiseni ubunzima. Ekugqibeleni, kuya kubakho ukunciphisa amanani kunye nokusebenzisa indlela elula, enjengolawulo lwesahlulo. Kodwa ukunamathela kwiikhalori kwangoko kwisicwangciso kuya kunceda.
Guqula imikhwa yakho ukuze utshintshe ubunzima bakho
Ukwehla kobunzima kukutshintsha indlela ophila ngayo, hayi indlela otya ngayo kuphela. Ukuba utshintsha indlela otya ngayo ukuze unciphise umzimba, kulungile. Kodwa kuya kufuneka utshintshe inkqubo yakho yemihla ngemihla ubandakanye umsebenzi owaneleyo wokunciphisa umzimba. Kwaye okokugqibela, awunakulindela iziphumo ezintle ukuba kwenziwe utshintsho oluncinci. Ukuba ufuna ngokwenene ukunciphisa umzimba, kuya kufuneka wenze umsebenzi ngamnye kwaba bathathu ukuba ufuna ukubona iziphumo zokwenyani. Rekhoda umthamo wakho wekhalori yemihla ngemihla, ulinganise umthambo wakho weveki, kwaye uphendule koochwephesha kwezempilo ukuze ufezekise injongo yakho yokulahleka kobunzima.